Ohatra sy valiny samirery ho an'ny fanadinana ITIL 2017 - Sekoly Tech
Valin'ny fanontaniana sy valiny momba ny fanadinana ITIL 2017
ITIL Exam 2017 - Fanontaniana sy valiny samirery
I ITIL dia fikarakarana ny fitantanana ny serivisy IT izay manitsy ny tolotra IT amin'ny filan'ny orinasa. Ny fahafantarana ny fepetra momba ny ITIL dia toy izany dia tena ilaina ho an'ny fikambanana. Ny fanamarinana ny ITIL dia mahazatra ireo manam-pahaizana momba ny ITIL sy ny fampiharana azy. Ireto misy fanontaniana sy valiny sasantsasany ho an'ny fanadinana.
1. Ahoana no hanampian'ny ITIL hampihenana ny fandaniana ary handany ny fandaniana amin'ny fandaniana amin'ny famatsiam-bola amin'ny IT?
Ny fampiasam-bola ataon'ny IT sy ny mpiasa dia manapaka ny ora fiasany amin'ny asa satria ny asa izay tsy voaverina dia mila ny asa efa vita. Ny ITIL dia ahafahan'ny fikambanana mampiato ity famokarana ity ary manome hery ny solontenany mba hifantoka amin'ny taham-ponenana manokana sy ny asa hafa amin'ny sehatry ny fahaiza-manaony.
2. Iza no afaka misafidy ny filaharan'ny fiovana novolavolaina ao anatin'ny fizotran'ny ITIL araka ny fanarahan-dalàna?
Ny safidy dia amin'ny alàlan'ny Change Manager. Manome toky izy fa ny tetikasa dia hahatratra ny tanjony ao anatin'ny faran'izay haingana ary mandany fetra amin'ny alàlan'ny fanitarana ny fandraisana mpiasa sy ny fampiasana azy. Izy dia mifantoka amin'ny fanovana eo amin'ny sehatry ny fandraharahana, ny sehatry ny asa, ny rafitra ary ny fanavaozana sy ny rafitry ny fikambanana.
3. Inona no fanamarinana natao taorian'ny fanovana natao?
Ny fiantsoana dia antsoina Post Implementation Review (PIR). Ity no famerenana sy fanombanana ny vahaolana miasa eo amin'ny asa. Izany dia vita aorian'ny fampiharana mivantana, amin'ny toe-javatra sasany aorian'ny fiafaran'ilay orinasa. Ny PIR dia manombatombana ny fampitomboana ny fandrosoana eo amin'ny lafin'ny rafitra taorian'ny nahaterahan'ny rafitra nandritra ny enim-bolana.
4. Ahoana ny fomba fiasa amin'ny ITIL no ahafantaran'ny fikambanana momba ny fanavaozana vaovao sy ny fivoarana?
Ny fitantanana ny kapila dia miantoka fa ny fiarahamoniana dia mitadidy hatrany ny fivoaran'ny fanavaozana. Izany dia manamafy fa ny rafitra IT dia azo henoina amin'ny fotoana tonga lafatra amin'ny volany marina amin'ny vidiny mety amin'ny fahombiazan'ny fahombiazana.
5. Amin'ny fotoana tsy ahafahan'ny Manam-pahefan'ny Service Manam-pahefana hanamafisana ny momba ny toerana misy ao amin'ny biraon'ny Service Service dia afaka mahavita fepetra manokana ao anatin'ny 10 segondra, izay mitatitra ny fifanarahana momba ny fifanarahana amin'ny serivisy momba ity filàna ity?
Misy ny fifanarahana antsoina hoe fifanarahana mifehy ny tetikasa (OLA) izay mampiseho ny fomba fiasan'ny IT amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny fandaminana ny serivisy na ny fifanarahana amin'ny serivisy. Natao ny hikarakarana ireo olana ao amin'ny trano fitehirizan'ny IT amin'ny alalan'ny fampisehoana ny fandaharan'asa momba ny fepetra sy ny tolotra IT izay hatao amin'ny birao tsirairay.
6. Inona avy ireo dingana roa amin'ny fitantanana serivisy mampiasa tetikady fitantanana sy fandinihana ny loza?
Ireo dingana roa dia ny IT Management Continuity Management and Availability Management.
7. Hazavao ny fepetran'ny tolotrasa fanompoana, ny fanodinana ny serivisy sy ny serivisy.
Sarintany amin'ny serivisy: Izany dia mampiavaka ny serivisy natolotry ny mpanome tolotra eo amin'ny tsena sy mpanjifa samihafa. Ny Service Portfolio Management dia mifandraika amin'ny portfolio'ny serivisy. Izy io dia miantoka fa ny mpaninjara ny serivisy dia manana ny serivisy hanatontosana ny vokatra ara-barotra tena ilaina amin'ny ambaratonga ara-drariny ara-drariny.
Fanomezana tolotra: Ity dia ampahany amin'ny portfolio Service. Izy io dia mirakitra ireo tolotra voaomana ho an'ny mpanjifa. Ny sampan-draharaha misahana ny serivisy dia mandrakitra ny harena azo avaozina sy ny fisian'ny fikambanana.
Fitrandrahana serivisy: Izany dia mirakitra ny serivisy miasa. Izy io dia miresaka momba ny asa fanompoana amin'ny ho avy izay atolotr'ilay mpaninjara ny serivisy.
8. Hazavao ny CMIS, AMIS ary KEDB.
Ny rafitra fampahalalana momba ny fitantanana ny kapila (CMIS): Izany dia ny fametrahana ny fahaiza-fototra iorenan'ny IT, ny fampiasana sy ny famonoana ny fampakarana ary ny mamela farafaharatsiny ny tahiry iray.
Accessibility Management (AMIS): Tranom-bary virtoaly amin'ny fampahalalam-baovao Fahaleovan-tena rehetra miala amin'ny faritra maro.
Bambara diso (KEDB) fanta-daza fanta-daza: Ny trangan-javatra malaza dia olana amin'ny mpamily maina voarakitra sy asa manodidina. Ireo singa mampikorontana fanta-daza fantatrao dia voarakitra ao amin'ny banky malaza fantatra.
Ilaina ny mandeha amin'ny fampiofanana ITIL mba hahafahan'ny olona mitady ho afaka hampifandray ireo mpampianatra maîtresy ary hampitombo ny fahalalany ny fahalalana fototra. Fahafaham-pahaizana amin'ny asa manaraka aorian'ny fanaovana tolotra ITIL.
Tetik'asa momba ny fanofanana ITIL